J@M - Episode 12 - GivingaPresentation - Myanmar Network
Posted by Myanmar Network on December 4, 2012 at 14:41 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
12. Givingapresentation (အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်တစ်ခုကို စီစဉ်တင်ပြခြင်း)
ဒီနေ့့ဟာ Jam ကုမ္ပဏီအတွက်အရေးကြီးတဲ့နေ့ ပါ။ Alison ဟာ Mario ကိုသူ့ရဲ့Record ကုမ္ပဏီအတွက် Jam ကအကောင်းဆုံး Websie ကိုဒီဇိုင်းထွင်ပေးနိုင်တဲ့အကြောင်း ခေါင်းစဉ်ကိုစီစဉ်တင်ပြနေပါတယ်။
"မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ။ Mario။ ဒီနေ့ Jam ကလူကြီးမင်းတို့ ကုမ္ပဏီအတွက် ဘာလုပ် ပေးနိုင်မလဲဆိုတာ ကြည့်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပထမအနေနှင့် ကျွန်မတို့အရင်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ပရောဂျက်စီမံကိန်းတွေကိုပြပါမယ်။"
"အခု လူကြီးမင်း ရဲ့Freewave Record Company အတွက် ကျွန်မတို့ အတိအကျ ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲ ဆိုတာကိုကြည့်ရအောင်။"
"ကျွန်မတို့  ရဲ့ထိပ်တန်း ဒီဇိုင်းပညာရှင်တွေနဲ့ အရည်အသွေးမြင့်မားတဲ့ နည်းပညာဆိုင်ရာ အဖြေရှာနိုင်ခြင်းတွေဟာ Jam ကလူကြီးမင်းတို့ ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအားလုံးပြည့်ဝစေမယ်လို့ အဓိပ္ပါယ်ဖော်ဆောင်လိုက်တာပါပဲ။"
"ကျွန်မနိဂုံးချုပ်ပါပြီ။ မေးခွန်းမေးစရာများရှိပါသလား။ Mario .. "
1. "ကျွန်တော်တို့ Website ဟာ hacker တွေရဲ့ ရန်ကကင်းဝေးစေဖို့ ခင်ဗျားတို့အာမခံနိုင်သလား။"
2. "အကယ်၍ ကျွန်တော်တို့ MP3 ဂီတ File တွေရောင်းရင်မူပိုင်ခွင့်ပြဿနာများရှိလာမလား။"
Mario ရဲ့မေးခွန်းတွေကို Alison ကဟောဒီလိုပြန်ဖြေထားပါတယ်။
A. "ကျွန်မတို့ ဈေးနှုန်းတွေက သူများဈေးနှုန်းတွေ နဲ့ယှဉ်နိုင်ပါတယ်။"
B. "ကျွန်မတို့ ဥပဒေပညာရှင်အဖွဲ့ကိုကြည့်ခိုင်းပါမယ်။"
C. "ကျွန်မတို့ ကုမ္ပဏီကငယ်တော့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တာပေါ့။ ပြီးတော့ အရည်အချင်း မြင့်မားတဲ့ အဖွဲ့လည်းဖြစ်တယ်။"
D. "ဟုတ်ကဲ့။ ကျွန်မတို့လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ရဲ့နည်းပညာပိုင်း ပညာရှင်က လုံခြုံရေးနှင့် ပါတ်သက် လို့ အထူးကျွမ်းကျင်သူပါ။"
အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုစီရင်တင်ပြတော့မယ်ဆိုရင် အခြေအနေ၊ အချိန်အခါပေါ်မူတည်ပြီးနှုတ်ခွန်းဆက်ပါ။
“Good morning, Mario.”
“Today, we’re going to look at what Jam can do for you.”
“Now, let’s look at exactly what we can do for you and for Freewave records.”
“Our top-ten designers and high quality technological solutions mean that Jan can meet all your needs.”
နိဂုံးချုပ်ပြီးရင်ပရိသတ်ကို မေးခွန်းမေးခွင့်ပေးတာ ကောင်းတာပေါ့။
“That brings me to the end. Do you have any questions, Mario?”
Permalink Reply by UMyo Min on December 4, 2012 at 16:24
Permalink Reply by Mya Mya Thein on December 4, 2012 at 19:38
Permalink Reply by Thike Htun on December 5, 2012 at 10:21
Permalink Reply by Sulay Yee on December 5, 2012 at 18:06
Permalink Reply by 1nj5cnacrvut2 on December 6, 2012 at 12:30
Permalink Reply by thanthansoe on December 10, 2012 at 14:24
Permalink Reply by Yin Min Phyu on January 27, 2016 at 16:48